Digigram IQOYA * LINK IP Audio-Over-IP သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သည်အရေးပါသော Embedded Solution 2014 ရရှိသည်ဂုဏ်ပြု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Digigram IQOYA * LINK IP ကိုပေး Audio-ကျော်-IP ကိုပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဝေဖန်မြှုပ်ထားသောဖြေရှင်းချက် 2014 ဂုဏ်ပြုရရှိ
ဝေဖန် Applications ကိုများအတွက် embed အတွက်အသံကျော်-IP ကိုဖြေရှင်းချက်အဖြစ်၎င်း၏တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဘို့အသိအမှတ်ပြု IQOYA * LINK
MONTBONNOT, ပြင်သစ် - ဒီဇင်ဘာ 19, 2014 - Digigram မှ IQOYA * LINK IP ကိုအသံ-over-IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က Assises de l'Embarqué 2014, ပြင်သစ်ရဲ့မှာ "Trophée de l'Embarqué Critique သည်" (ဝေဖန်မြှုပ်ထားသောဖြေရှင်းချက်ဒိုင်းဆု) ရရှိထားပြီးပါပြီ အဆိုပါ embedded စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကို။ ပဲရစ်မှာနိုဝင်ဘာ 24 တင်ပြ, ဆုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအားစိန်ခေါ်အတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဖွံ့ဖြိုးပြီးစနစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ကြံ့ခိုင်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Digigram ရဲ့ IQOYA * LINK system ကိုမသက်ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်သော EMC သို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများတွင်တပ်ဆင်အဖြစ်ရှုပ်ထွေးအချက်များ၏, FM ရေဒီယိုက transmitter မှဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ၏ IP-based ပေးပို့များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၏ 24 /7အရည်အသွေးကိုသေချာ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IQOYA ၏ထူးခြားသောဗိသုကာ * LINK များထားရှိပင်အခက်ခဲဆုံးအတွက်ကြီးမားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဖြစ်ထွန်း" မိုက်ကယ် Quaix, Digigram မှာဆော့ဖျဝဲအုပ်စုကိုမန်နေဂျာနှင့်ဖြေရှင်းချက်အထူးကုကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကထိုကဲ့သို့သောသူတို့သည်ဆင်းရဲသားကွန်ယက်ကိုအရည်အသွေး, Hard-To-လက်လှမ်းမမီ, ပိုင်ရှင်မဲ့သောနေရာများအတွက်ဖြန့်ကျက်ခြင်း, စိတ်မချရပါဝါသတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် variable တွေကိုရှိနေသော်လည်းမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဒီစနစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဆုချီးမြှင့်ပွဲနှင့်အတူ - - ထို့ကြောင့်ငါတို့မြင်ရန်အလွန်ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်အခြားသော့ချက်ကစားသမားထုတ်လွှင့် applications များတောင်းဆို၌ဤဖြေရှင်းချက်၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအသိအမှတ်မပြုကြောင်း "
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမစ်ရှင်-အရေးပါအိုင်ပီကွန်ရက်များ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, IQOYA * LINK ထုတ်လွှင့်ရိုးရာအသံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်များနှင့်အတူထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်အများကြီးနိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ-over-IP ကိုကွန်ရက်များဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါတယ် ။ အဆိုပါ IQOYA * LINK Full-duplex encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါဖြေရှင်းချက်အိုင်ပီ-based To-စတူဒီယိုစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်စတူဒီယို-to-transmitter ကိုလင့်များအဖြစ်ဒီဗွီဘီအော်ပရေတာမှအသံအစီအစဉ်ကိုဖြန့်ဝေဘို့အလျှော့စွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းသည်။
အရည်အိုင်ပီ (TM), Digigram အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါစမတ် IP ကို ​​audio streaming ၏အင်ဂျင်အပေါ်အခြေခံပြီး, IQOYA * LINK မြင့်မားသောလယ်ပြင်၌-သက်သေပြ MTBF အလွန်နိမ့်ပြန်-to-ပြန်အောင်းနေချိန်နှင့် State-Of-The-Art အင်္ဂါရပ်များဟာ host ဂုဏ်ယူ အသံအရည်အသွေးနှင့်ဆက်လက်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါစနစ်အမသက်ဆိုင်ရဲ့ IP ကွန်ရက်၏ Bandwidth ကို၏, အကောင်းဆုံးအသံအရည်အသွေးကိုရရှိနိုင်ကြောင်း wideband အသံချုံ့ algorithms တစ်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုကအလိုလိုသိ Web-based user interface ကိုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးရိုးရှင်းစွာနှင့်အသုံးပြုသူများကွန်ယက်ပေါ်တွင် Real-time မက်ထရစ်မှ access ကိုပေးသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Digigram/Digigram-IQOYA-LINK.jpg
audio အသံလွှင်း Digigram IQOYA * LINK 2014-12-19
ယခင်: ChyronHego နည်းပညာ Tinker Bell နဲ့အား NBC ရဲ့အခြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Visual Effects မှဘဝကပေးသနား '' ပတေရုသပန်တိုက်ရိုက်! '
နောက်တစ်ခု: RoboCam သင် Capture မည်!